ကျွန်တော်နှင့် ဘာသာမဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျွန်တော်နှင့် ဘာသာမဲ့
Posted by koyo on Jul 21, 2011 in Copy/Paste | 38 comments
ဘာသာတရားတို့၏ အလေးမူရာ ညွှန်းဆိုချက်ကို ကျွန်တော်နားလည်သလို မိတ်ဆွေများထံ ဝေငှလိုက်ပါရစေ။ တစ်စုံတစ်ရာ အသိအမြင်တစ်ခုကိုရရှိစေ ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့။ ဘာသာတရားတွေက လူတွေကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ် လို့ မိတ်ဆွေတို့ထင်မြင်ပါသလဲ။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဘာသာမဲ့ဆိုတာ ဘယ် ဘာသာကိုမှ မကိုးကွယ်မယုံကြည်တာလို့ မယူဆလိုပါ။ ကိုးကွယ်ယုံ ကြည်ခြင်းကြောင့် လူတွေဟာ အစုအဖွဲ့တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီး တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ အ ငြင်းပွားစေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ဘာသာတရားက လူတွေအတွက် ဆူးငြောင့်ခ လုတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဘာသာတရားတိုင်းက ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲအမှန်လို့ဆုပ် ကိုင်ထားကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတစ်စုနှင့်တစ်စုခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီး လူတွေငြိမ်း ချမ်းလို့မရနိူင်တော့ဘူးပေါ့။ တကယ်တော့ ဘာသာတရားတွေရဲ့ပန်းတိုင်ဟာ လူတွေငြိမ်းချမ်းကြဖို့မဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမယ့် ယနေ့လက်ရှိဘာသာတရား တွေဟာ တစ်ခြားတစ်ခြားသောဘာသာတရားတွေနဲ့သာမက ပင်မဘာသာ တရားအချင်းချင်းတောင် ပဋိပက္ခတွေငြှိမ်းလို့မရနိုင်ဖြစ်နေကြလေရဲ့။ ဤသို့ သောအခြေအနေမျိုးတွင် ကျွန်တော်သည် ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါ တော့သည်။
ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားသော ထိုကျွန်တော်သည် အဘယ်အသိအမြင်နှင့်နေ ထိုင်သည်ဟု မိတ်ဆွေထင်မြင်ပါသနည်း။ လူကိုမငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ ဘာသာတ ရားတိုင်းဆီက ဘုံတူညီချက်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမူတို့ကို ရှောင်ြ်ကဉ်လိုက်နာခြင်း ဖြင့်နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ ထိုရောအခါ ကျွန်တော်သည် မည်သည့်ဘာသာ ၀င်နှင့်မဆို ပဋိပက္ခတို့ငြိမ်း၍နေလေတော့၏။ ပဋိပက္ခတို့မရှိတော့ခြင်း၏တန် ဖိုးကို ပဋိပက္ခမရှိတော့မှသာ သိမြင်နားလည်နိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ မိတ်ဆွေ သင် ခေါင်းရှုပ်သွားပါသလား။
ထိုအရှုပ်ကို အရှုပ်အတိုင်းမထားလိုက်ပါနှင့် သတ္တ၀ါအားလုံးထဲမှာ လူဆိုသောသတ္တ၀ါသည် အရှုပ်တို့ကို အရှင်းနိုင်ဆုံးသောသတ္တ၀ါပါ။ ထိုအ ရှုပ်ကိုရှင်းချင်သူ မည်သူမဆို လိုက်နာရမည့်အချက်သည် တစ်ချက်ကလေး သာရှိပါလေ၏။ ထိုအချက်ကား ရိုးသားခြင်းပင်တည်း။ ဤစကားကြောင့် မိတ်ဆွေစိတ်ထဲမှာ ပေါ့ဟာဟာ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ရိုးသားချင်ကြပေမယ့် ရိုးရိုးသားသားဖြစ်မနေကြတာတွေကို မိတ်ဆွေ မတွေ့ ချင် မမြင်ချင်အဆုံး တွေ့နေရမှာပါ။ သည်အဖြစ်တွေကိုကြည့်ပြီး ရိုးသားဖို့ဆို တာ အဘယ်မျှထိခက်ခဲတယ်ဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါ တယ်။
ကျွန်တော်အဘယ်ကဲ့သို့ ရိုးရိုးသားသားနေနေပါသလဲ။ ကျွန်တော့့််အမြင်နှင့်ကျွန်တော့် ရိုးသားပုံကို တင်ပြပါရစေ။ ကျွန်တော်သည် ခရစ်စ ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သောလူတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပေါင်း သင်းဆက်ဆံရသောအခါ ထိုသူက အရာရာတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုအတိုင်းသာဖြစ်ကြရသည်။လူတစ်ယောက် အဆင်းလှခြင်း အဆင်းမ လှခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်း၊ ပညာတတ်ခြင်း ပညာမတတ်ခြင်း၊ အ သက်ရှည်ခြင်း အသက်မရှည်ခြင်း…အစစတို့သည် ဘုရားသခင်၏ အလိုအ တိုင်းဟုဆိုလာ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏မျက်နာသာပေးမှုကို ရရှိစေဖို့ မ ကောင်းမှုတို့ကို မပြုလုပ်ရန် စေတနာဖြင့် ပြောဆိုဆုံးမလာ၏။
ထိုသူအား ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမည်။ ကျွန်တော်နှင့်ခင်ဗျား ပေါင်း သင်းဆက်ဆံသောအခါ ခင်ဗျားအပေါ်ကို ကျွန်တော်ဘာမှ မကောက်ကျစ် မလိမ်လည် အမျက်မထားမိအောင်နေပါသည်။ ကူညီစောင်မခွင့်ရလျှင် ကူ ညီစောင်မနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမည်။ ခင်ဗျားအပေါ်မှာ ဘာမှအနှောင့်အရှက် မပေးမိအောင်နေပါသည်။ ထိုသို့နေထိုင်ခြင်းကြောင့် ခင်ဗျားနှင့်ကျွန်တော် မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟု ပြောပါမည်။ ထိုသူမည်ကဲ့သို့ဖြေမည်ဟု မိတ် ဆွေထင်ပါသနည်း။
ထိုနည်းတူစွာ ဟိန္ဒူဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ၊ မွတ်စလင်ဘာ သာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတို့ကလည်း သူတို့ဘာသာ၏ လမ်းညွှန်ချက်ရှိ သည့်အတိုင်း ပြေဆိုလာသည်ဆိုပါအံ့။ ကျွှန်တော်သည် ပြောခဲ့ပြီးသလို ပြန် လည်ပြောပါမည်။ ထိုသူတို့သည် ကျွှန်တော့်အား မည်ကဲ့သို့ တုန့်ပြန်ကြဟု မိတ်ဆွေထင်ပါသနည်း။ အလားတူစွာပင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကလည်း နောက်ဘ၀ နောက်ဘ၀က ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံတို့အလျှောက် အဆင်းလှခြင်း အဆင်းမလှခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်း၊ ပညာတတ်ခြင်း ပညာမတတ်ခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း အသက်မရှည်ခြင်း…အစစတို့သည် ကွဲ ပြားကြရလေကုန်၏။ ထို့ကြောင့် မကောင်းမူတို့ကို ရှောင်ရှား၍ ကောင်းမူတို့ ကို ပြုလုပ်ရန် ပြောဆိုလာပါအံ့။ ထိုသူအားလည်း ပြောခဲ့ပြီးသလို ပြန်လည် ပြောဆိုရပါလိမ့်မည်။ထိုရောအခါ ထိုသူ မည်ကဲ့သို့ဖြေမည်ဟု မိတ်ဆွေထင် ပါသနည်း။
ကျွှန်တော်သည် လူတို့အား လေးစားပါ၏ တန်ဖိုးထားပါ၏။ ထို့ကြောင့် ကျွှန်တော်သည် လူတို့အား တလေးတစားဆက်ဆံပါ၏။ တန်ဖိုးထား၍
ဆက်ဆံပါ၏။ ထို့ကြောင့် လူတို့ဆီမှ ထွက်ပေါ်လာသော လူမူဆင်းရဲတို့မှ ဆိတ်သုဉ်း၍နေလေတော့၏။ ထိုကဲ့သို့ နေထိုင်ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသောသူအား မည်သည့်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည်ဟူ၍သတ်မှတ်ကြပါမည်နည်း။
ဘာသာမဲ့ဆိုတာလေးကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပြပါဦး။ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ဘာသာမဲ့ကဘယ်လို အမြင်တွေရှိပြီး ဘာသာမဲ့ ဖြစ်တာလဲနဲ့ အသင်ကရော ဘယ်လိုအမြင်တွေရှိပြီး ဘာသာမဲ့အယူအဆကို ယူဆတာလဲ။ ဒါလေး ကို အရင်ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အသင်ပြောတယ်လေ ဘယ်ဘာသာရဲ့ အယူအဆက ဘယ်လို ဘာညာတွေဟာ ဘာသာမဲ့အယူအဆကို တင်ပြဘို့ တကယ်ရော အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေသလားပေါ့။
သူငယ်ချင်းတယောက်က ဘာသာမဲ့ပါ … ။
သဘောင်္သား လုပ်နေပြီး … ရေလမ်းဘာညာသွားလည်း ဘာမှကို မကိုးကွယ်ဘူး… ကျွန်မတို့က ဘာသာရေးနဲ့ ခြောက်လည်း မကြောက်ဘူး … ။
မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာတဲ့ …
ဘာအယူကိုမှ မယူတဲ့ အယူကို ………….ယူသူ။
ဘာကိုမှ မကိုးကွယ်တဲ့လုပ်ရပ်ကို ……………ကိုးကွယ်သူ။
ဘာသာသာကိုမှ မယုံကြည်တဲ့ဘာသာကို ……..ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူ ။
တစ်ယောက် – တစ်ဘာသာ။
ူlionking ရေ စာကိုသေသေချာချာဖတ်စေချင်ပါတယ်။ တဆက်တည်း etoneကိုလည်းပြောလိုက်ပါရစေ။
ကိုယ့် ကိုယ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာ ဘာသာမဲ့စစ်စစ် ရေမရောတဲ့ စစ်မှစစ် ဘာသာမဲ့စစ်ပါပဲလို့။ ဘာသာမဲ့
ဆိုသူက ရေလမ်းသွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်သွားမယ့် လှေ၊သင်္ဘောကိုသေချာခိုင်ခံ့အောင်ပြင်ဆင်မယ်။ မိုးလေ၀သ သတင်းကိုအမြဲနားစွင့်ထားမယ်။ပင်လယ်ဓားပြတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို တတ်နိုင်သလောက်စောင့်ကြည်မယ်။ဒါဆိုရင် ဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
True Answer နားလည်မှုလွဲနေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရစေ။အယူဆိုတာ ဘာကိုပြောတာပါလဲ။ ဘာကိုမှ မကိုးကွယ်တဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုတာကရော ဘယ်လိုလုပ်ရပ်ကိုပြောတာပါလဲ။ သူများပါးစပ်ဖျားမှာ လမ်းမဆုံးဘဲ
လုပ်သင့်တာနဲ့ မလုပ်သင့်တာကို ကိုယ်တိုင်နေသူ။ ဒီသူဟာ ဘယ်ဘာကို ကိုးကွယ်စရာလိုအုံးမှာလဲ။ ကိလေ
သာဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးနဲ့တော့ မခြိမ်းခြောက်လိုက်စေချင်ပါ။
လူတွေယဉ်ကျေးနေကြတာဟာ လူ့အသိအရ၊ သမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေအရ ယဉ်ကျေးနေကြတာပါ။ လူအ၀န်းအ၀ိုင်းကနေ ဘာသာရေးဆိုတာတွေ ဖယ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီထက်ပို ရိုင်းမသွားနိုင်ပါဘူး။ ဘာသာရေးဆိုတဲ့ အစွဲတွေ ကင်းသွားလို့ ပိုတောင် ယဉ်ကျေးလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတွေ ရိုးသားပြီး ယဉ်ကျေးဖို့မှာ တကယ်လိုအပ်တာက ရိုးသားစေတဲ့ အသိဥာဏ်လမ်းညွှန်မှုပါ။ ဒီအသိဥာဏ်ကို ဘာသာရေးတွေကပဲ ပေးသလိုနဲ့ ဒီခေတ်မှာ ဘာသာရေးသမားတွေက လုပ်စားနေကြတာ။
(အရှင်သူမြတ်များကို ဘုရားတပည့်တော်တို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်သည်ကိုလည်း မြင်ချင်လှပါသည်) ဆိုတဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓမဟောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်ဆန်ဆန် ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် မျက်လှည့်ဆန်ဆန်တရားတွေ ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေဟောနေကြမယ်ဆိုဦးမယ်ဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံး ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်တာကို ဘယ်တော့မှ မြင်တွေရမှာ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာသာ ဘုန်းကြီးတွေ ဘာပြောပြော မစိစစ်ပဲနဲ့ မှန်ပါ့ဘုရား၊ တင်ပါ့ဘုရားနဲ့ ဖော်လိုလိုက်ပြီး ၀ါးလုံးခေါင်းထဲ လသာနေကြတာ —။ ဒီအတိုင်းသာ ဆက်သွားရင် ကြာရင် ဘာသာရေး အင်တာနေရှင်နယ် တောသားတွေဖြစ်တော့မယ်။ ဖော်လို မလိုက်ကြပါနဲ့တော့။ အမြင်ကျယ်သင့်ကြပါပြီ။ အကျဉ်းအကျယ် နေရာမလွဲကြပါနဲ့တော့။ ကျယ်ရမှာက အသိအမြင် – – ။ ကျယ်နေတာက – – – ဟိုဒင်းဖြစ်နေတော့ – – – ကိုယ့်တရားမှ ကိုယ်အမှန်မလုပ်ကြပါနဲ့တော့။ အသိအမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ် လေ့လာကြပါ။
တကယ့်တရားခံ အစစ်ကို မသိရင်တော့ ။
ဟိုလူ့ တရားခံ ထင် ၊
ဘယ်သူတွေ မဲ.မဲ. ဒို.ကတော. ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ
ဘာသာမဲ့ = Communist
Communist ကလည်း ဘာသာတစ်ခုပဲနော်။
လောက် ၈၀ လောက်ရှိတဲ့ဘာသာမဲ့လူတွေရဲ.သူတို.တွေရဲ.ဘာသာရေးပေါ်မှာထင်မြင်ချက်မျိုးကိုဘဲ သိ
ချင်ပါတယ်။ အဲဒီအရွယ်ကျတော့အတွေ.အကြုံတော်တော်စုံပြီလေ။ koyoတို.ကျတော့ ဘ၀မှာသိပ်ဆိုးဆိုးဝါး
သဘာဝပါ။တခါတရံလူလူချင်းကူညီနှိုင်ပေမဲ့ တခါတရံလူလူချင်းမကူညီနိုင်ပါဘူ.။လူအသီးသီး ကိုယ်ကိုအမှန်တကယ်ကူညီနိုင်မဲ့သူ၊ ကိုယ်စိတ်ကိုသက်သာရာရအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အရာကိုရှာဖွေကြတာပါါဘဲ။အဲဒီအခါမှာလူတွေကသူတို.ရဲ့
ရိုးချက်ကတော့ ကမ်းကုန်အောင်ပါဘဲ။ စာတွေ များများဖတ်ပါ။
အသီးတည်စ စပါးနှံလို ငါမှငါဘဲ လို့လဲ သိပ်မစွဲနေပါနဲ့။
အဆံပြည့် အသီးရင့်မှ ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျပြီး ငါသိတာ ဘာမှမရှိသေးပါလား ဆိုပြီး ငြီးတွားနေရ အုံးမယ်။
လူသား ပဓာန အယူအဆတွေဟာ ကွန်မြူနစ်တွေ ကျင့်ခဲ့ပြီးသား။
အမေရိကားက ဟစ်ပီတွေ လိုက်လုပ်ခဲ့ပြီးသား။
ကိုရိုး ရဲ့ အတွေးတွေက ဟစ်ပီဆန်လွန်း ပါတယ်။ အဲဒီ အယူအဆတွေက ဘုရားမပွင့်မှီကတည်းက ရှိခဲ့ပြီးသား အယူမှား (၆၄) ပါးထဲပါခဲ့ပြီးသားပါ။
ဗုဒ္ဓဘုရှားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လဲ လူသားဝါဒ ကိုဟောပြခဲ့တာပါဘဲ။
မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်။ စိတ်ကို ဖြူစင်အောင်ထား ဘို့ သတိ အစဉ်ရှိဘို့ ဟောပြညွှန်ကြားခဲ့တာပါဘဲ။
ဘုရားရဲ့ တရားတော်မှာ ဧဟိပသိကော၊ သြပနေယိကော၊ လာလှည့်၊ လက်တွေ့ ကျင့်သုံးလှည့် လို့ဖိတ်ခေါ် ထားပါတယ်။ လေ့လာပါဦး။
အများလက်ခံကျင့်သုံး နေတိုင်းလည်း မယုံပါနဲ့။
ရှေးကတည်းက ရှိပြီးသား ဆိုတိုင်းလည်း မယုံပါနဲ့။
ဘုရားဟောခဲ့တယ် ဆိုတိုင်းလည်း မယုံပါနဲ့။
ကိုယ်တိုင် စဉ်းစား၊ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်၊ အကျိုးရှိမှ ယုံပါ – ဆိုတဲ့ ကေလာမသုတ် ကိုလဲ လေ့လာကြည့်ပါ။
တစ်ကယ့်အရေး ကြုံလာတော့လည်း ဗိုလ်တာရာ(ရဲဘော်သုံးကျိပ်) တို့လို ရဲရဲတောက် ကွန်မြူနစ်၊ ဂျပန်ပြန် စစ်ဗိုလ်၊ တောမပစ်ရမနေနိုင်တဲ့ မုဆိုး၊ လက်တွေ့မှယုံမယ် ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာ တောင်မှ ၀တ်ကြောင်စွန့်ပြီး တရားထိုင်၊ ပုတီးစိပ် ဘာသာရေးလုပ်လာတာကို ကြည့်ပါ။ ဒါက ထင်ရှားတာကို ပြောပြတာပါ။
အဲဒီတော့ လူပေါင်းစုံနဲ့ တွေ့ထိဆက်ဆံပြောဆိုယင်း၊ စာတွေကိုလဲဖတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တင်မကပါဘူး၊ ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာ၊အစ္စလာမ် ကိုရမ်ကျမ်းစာ၊ ဟိန္ဒူကျမ်းစာ အယူအဆတွေ ကိုလဲလေ့လာပါ။ ဒဂုန် ဦးစန်းလွင်တို့လို လမ်းဆုံးတဲ့အခါ ရွာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
စာထဲကအဆီအနှစ်တွေကို စီစစ်လေ့လာပြီးမှ ယုံတာ၊မယုံတာ၊ လိုက်နာကျင့်သုံးတာ မသုံးတာ အကျိုးရှိတာ မရှိတာတွေ ပြောကြရအောင်ပါ။ ဒီတော့ စာတွေဖတ်ပါအုံး၊များများ ဖတ်ပါ လို့ ဘဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
Khon Yenaung ရေ ခင်ဗျားပြောတာအရမ်းကောင်းတယ် ဘာသာမဲ့ဆိုထဲက ဘာသာရေးလေ့လါမှုနည်းသေးတာရယ် အရွယ်ငယ်သေးတယ် လို့ထင်ပါတယ် …
comment တွေ ဖတ်ရတာ ကောင်းလှောင့်တေး ကောင်းလှောင့်တေး
ကိုရိုးလဲ ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ် အမှန်ဖြစ်ရမယ် လို့ တထစ်ချ မမှတ်နဲ့လေ ..
တို့က သဂျီးတို့လို အထက်က comment ပေးတဲ့လူတွေလောက်တော့ ဘာသာရေးကို သိပ် မလိုက်စားခဲ့ပေမယ့် .. နည်းနည်း ဆင်ခြင်တတ်လာခဲ့ပါပြီ .. comment များကို ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်
ကိုရိုပြောတဲ့ဟာမျိုးဆန်ဆန် ဘာသာတခုရှိတယ်။ ဘဟာအီသာသနာတဲ့။ အရင်ကတော့ တာမွေဈေးနားမှာ ဌာနချုပ်ရှိတယ်။ ကိုရိုပြောသလိုပဲ ရွှေညဏ်တော်စူးရောက်ပြီး ဘာသာတိုင်းက ကောင်းတာတွေ တူတာတွေကို စုတုပြုထားခြင်းပေါ့။ တကယ်တော့ အဲဒီဘာသာက မွတ်စလင်းဂိုဏ်းခွဲတခုဖက်ကို ပိုသက်ရောက်ပါတယ်။ မွတ်စလင်ဘာသာမှာ ဘာသာတိုင်းကဘုရားတွေကို ရှေးတမန်တော်များအဖြစ် အယူရှိထားတာကိုး။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ထွန်းကားရာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒသမှာတော့ အဓမ္မဝါဒအဖြစ် ကြေငြာပြီး နှိပ်ကွပ်ခြင်းခံရတယ်။ ဘဟာအီသာသနာသည် လစ်ဗျား၊ အိန္ဒိယနဲ့ အီရန်လို အချို့မွတ်စလင် တိုင်းပြည်တွေမှာ လူနဲစုကြီးကြီးမားမားဖြစ် တည်ရှိပါတယ်။ ကိုရိုပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ အနတ္တဖက်ကိုဆောင်ပြီး သူတို့ကတော့ အတ္တဖက်ကို သွားတယ်ထင်ပါတယ်။
ကိုကြောင်ကြီးရေ ဘဟာအီသာသနာ ငှါနချုပ်က အစ္စေ၇းနိုင်ငံ ဟိုက်ဖာမြို့မှာ ရှိပါတယ်။ အဌမမြောက် ကမ္ဘာ့အံ့ဘွယ်လို့ အမွှမ်းတင်ထားတာပါ။ ဘဟိုင်းစင်တာဆိုပြီး စက်ဝိုင်းပုံ လှေကားထစ်ဥယျာဉ်ကြီး ဆောက်ထားတာ လှမှလှပါ။ တောင်ကုန်းထိပ်ကနေ ဟိုက်ဖာမြို့လယ်ထိ တစ်ကီလိုမီတာ ရှည်ပါတယ်။ အထဲဝင်ကြည့်တော့ အဆောက်အအုံထဲမှာ ပန်းအိုးတွေပဲတွေ့ပါတယ်။ အထဲဝင်ရင် ဖိနပ်မစီးရ၊ ဦးထုပ်မဆောင်းရ၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ ပီကေမ၀ါးရ၊ ဓါတ်ပုံမရိုက်ရပါ။ ခိုးရိုက်လို့တောင် မရအောင် အစောင့်တွေ ထားထားတယ်။ တံခါးမကြီးမှာ ရှိတဲ့ တံဆိပ်က မွတ်စလင်တွေရဲ့ ကြယ်နဲ့လ တံဆိပ်ပါ။ The Bahမှာ ဘဟာအီဘာသာသစ်ကို ဗျာဒိတ်မြွက်ကြားခဲ့သော ပါရှန်မွတ်စလင် တစ်ဦးပါ။ ဘာသာအားလုံးရဲ့ ကောင်းတာတွေအားလုံးကို စုထားတာပါ။ သူ့ကိုသူ နောက်ဆုံးတမန်တော်လို့ ကြော်ငြာတော့မှ ဖမ်းချုပ်ပြီး အစ္စရေးရဲ့ နောက်မြို့တမြို့မှာ ချုပ်ထားတာ သေသွားတဲ့ အထိပါပဲ။ ရုပ်ကြွင်းကိုတော့ အာ့တ်ကိုမြို့နားမှာ ထားထားပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ကိုးကွယ်သူ ငါးသန်းရှိပါတယ်။ The Baha’ullah (1817-1892) က လူသားအားလုံးတန်းတူ ညီမျှမှု၊ မသင်မနေရပညာရေး၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေး၊ ကြောင်းကြိုးဆင်ခြင်သုံးသပ်ရေး၊ သိပ္ပံနည်းကျ အသိပညာလိုက်စားရေး၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး တို့ကို ဆုံးမထားပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်မ သိသလောက် ပြောပြတာပါ။
I have met with them,
But, they spell out & pronounce themselves “Ba Hai”
There are series of divine messengers, each of whom establishedareligion that was suited to the needs of the time and the capacity of the people.
These messengers have included Abraham, the Buddha, Jesus, Muhammad and most recently the Báb and Bahá’u’lláh.
လောလောဆယ် သိထားတဲ့ စစ်တမ်းတခုအရ.. ဒီကမ္ဘာမှာ..ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာပေါင်း ၅သောင်းကျော်ရှိတယ် ပြောတယ်..။
ပြော၇ရင် ကွန်မြူနစ်လည်း ကိုးကွယ်ရာဘာသာတခုပဲထင်တယ်..။
ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀အယူမယူ… (ငရဲ နတ်ပြည် မယူ)
ဦးနုခေတ်ကလားတော့မသိဘူး..။ ဘယ်ဘာသာမှ မကိုးကွယ်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲက အဆိုတင်သွင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပယ်ချခံခဲ့ရတယ်။ ဘယ်ဘာသာမှ မကိုးကွယ်ဘူးဆိုတာလည်း ဘာသာတစ်ခုပဲလို သတ်မှတ်ပြီးတော့လေ။ ဘာသာမဲ့ဆိုတာလည်း ဘာသာတစ်ခုပဲပေါ့။
ဘယ်ဘာသာမှ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း အဖွဲ့တစ်ခုပဲလေ… အဲဒီတော့ ဘာသာမဲ့ ဆိုတာလည်း ဘာသာမဲ့ဘာသာပေါ့… ဘယ်သူ့ကိုမှ မကိုးကွယ်ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း …………………………………………………………………………………
ဘာသာမဲ့ဆိုတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်…..ကို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ တွေကို ပြောင်းလည်း ပစ်တာ ဘာသာတရားယုံကြည်မှုကြောင့်လည်းပါတယ်လေ….ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ… ကျွန်တော်ကတော့ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကိုပဲယုံကြည်တယ်…
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က ကိုးကွယ်ချင်ကိုးကွယ်၊ မကိုးကွယ်ချင်လဲ မကိုးကွယ်နဲ့ပေါ့… ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်လေ…
ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးရတာက အရမ်း အန္တရာယ်များပါတယ်…
ဒါကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံ
ဗုဒ္ဓဘာသာ မကိုးကွယ်ပဲတော့ အသက်မဆက်နိုင်ဘူး….ဒါပဲ။။။။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကိုပြောတာ။
Millionaire Generic says:
ခရာစ်ယာန်ကျောင်းသွားရင် – ခရာစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးတယ်
ပလီ ရောက်ရင် – ပလီကထုံးအတိုင်း ၀တ်ပြုတယ်
ဗုဒ ဘုရားတွေတွေ့ရင် – ဘုရား ရှိခိုးတယ်
ပေးသမျှ ၀ါဒ စာပေတွေ အားလုံးဖတ်တယ်
ပြောသမျှ စကားတွေ အားလုံး နားထောင်တယ် .. ရန် ပြန်မဖြစ်ဘူး။ ပြန်မတိုက်ဘူး။
ဥပမာ .. ကမ္ဘာကြီးက ပြားတယ် .ဆိုပါတော့ . မှန်တယ် လေ
ကမ္ဘာက လုံးတယ် ဆိုလည်း မှန်တယ် ..
ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မရှုတ်ချဘူး။ မမြှောက်ပင့်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ချီးကျူး ပေးတယ်။
နောင်ဘ၀ ရှိတယ် မရှိဘူး။ အဲ့ဒါ ဟုတ်ချင် ဟုတ်မယ် မဟုတ်ချင်မဟုတ်ဘူး .. လက်ခံ တဲ့သူနဲ့ တွေ့ရင်လက်ခံပေးလိုက်တယ် လက်မခံတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင် လက်မခံပေးလိုက်ဘူး။
ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံ အားလုံးလက်ခံတယ် ဒါပေမယ့် Stephen hawking ရဲ့ စာတွေလည်းဖတ်တယ်
နတ်တွေရှိတယ် မရှိဘူး, ၀ိဥာဉ် တွေရှိတယ် မရှိဘူး, ငရဲ ရှိတယ် မရှိဘူး အားလုံးလက်ခံတယ်
ပစ္စုပ္ပာန် ဘ၀မှာ ရုန်ကန်ပြီး ရထားတဲ့ပိုက်ဆံ ကို လိမ်ညာယူသွားလို့ကတော့ လုံးလုံး လက်မခံပါဘူး ခင်ဗျား။
အင်း.. ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်တော့ .. ကံတူအကျိုးပေးပေါ့နော်..
ကိုယ်အလိမ်ခံရတယ်ဆိုတာက .. သံသရာအဆက်ဆက် ဘယ်တုန်းကမှန်းတော့မသိဘူးနော်
ရှေးဘ၀လည်းဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်.. အရင့်အရင်ဘ၀တုန်းကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့..
တစ်ချို့ရှိတယ်လေ… အရင်ဘ၀က ဘာတွေလုပ်လို့လုပ်ခဲ့မှန်းတောင်မသိအောင်ပဲ..
ချမ်းသာတယ်.. လုပ်ငန်းတွေလည်း အောင်မြင်တယ်.. ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းတွေက .. ရန်သူမျိုးငါးပါးဖျက်စီးခြင်းခံရတယ်.. တရားနာဖူးတာပြောပြတာ.. သူတို့အနေနဲ့ အခုဘ၀ချမ်းသာတယ်ဆိုတာက .. အရင်တုန်းက ဒါနကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြလို့ပေါ့..
လုပ်ငန်းတွေ ဖျက်စီးခံရတယ်ဆိုကတော့ ..သူတို့အရင်ဘ၀က ရထားတဲ့ငွေကြေးက မသန့်ရှင်းလို့ပေါ့.. ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ကတော့ပြောတယ်.. ကိုယ့်ပစ္စည်းခိုးခံရင် .. အရှက်မရှိအော်မနေနဲ့တဲ့.. ဒါကိုယ်အရင်ဘ၀က သူခိုးဖြစ်မှန်းကြေငြာလိုက်တာပဲတဲ့..
“ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ကတော့ပြောတယ်.. ကိုယ့်ပစ္စည်းခိုးခံရင် .. အရှက်မရှိအော်မနေနဲ့တဲ့.. ဒါကိုယ်အရင်ဘ၀က သူခိုးဖြစ်မှန်းကြေငြာလိုက်တာပဲတဲ့..”
ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်)ကတကယ်ကြီးကို ..အဲလိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့.. တော်တော်အံ့သြမိမှာပဲ..။
တကယ်သာအဲဒီလို လိုက်ပြောဟောနေတယ်ဆိုရင်တော့… သြော်.. လို့ပဲ..အသံထွက်နိုင်ပါတော့မယ်..။
“ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ကတော့ပြောတယ်.. ကိုယ့်ပစ္စည်းခိုးခံရင် .. အရှက်မရှိအော်မနေနဲ့တဲ့.. ဒါကိုယ်အရင်ဘ၀က သူခိုးဖြစ်မှန်းကြေငြာလိုက်တာပဲတဲ့..”
Yes ဒယ်အိုးဆရာတော် said that,
Not only ဒယ်အိုးဆရာတော်, alsoalot of famous ဆရာတော် said like that.
Every Buddhism scholar believe that.
This is the main logic of Buddhism ” ကံ, ကုသိုလ်, သံသရာ & ရှေးဘ၀ “
ဒါကတော့ သဂျီးက ဆရာတော်ဟောတဲ့တရား ကိုယ်မြင်ချင်တာလေး ပိုင်းမြင်ချင်တာကိုး..။ ကံ၊ သံသရာ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ပါ။ အလွန်အကျွံ မဖြစ်ဖို့ဘဲ လိုပါတယ်။ လူဆိုတာ အကောင်းပဲ မြင်ချင်တယ်။ ကိုယ့်လက်ထက်မှာ အခြေအနေတွေနိမ့်ပါးနေရင် ရမယ်ရှာ အပြစ်တင်ရင်း မိုးပေါ်သေးထောင်ပေါက်မိတတ်တယ်။ ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲ၊ တိုးတက်၊ ဆုတ်ယုတ်ဆိုတာ ဖြစ်နေကြ ဓမ္မတာတွေ၊ သာသနာနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ အရာရာ ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ် ပျက်ချိန်တန် ပျက်မှာပဲ။ ဒါကိုနားလည်ရင် ချမ်းသာချိန်မှာ ဆင်ခြင်နိုင်မယ်၊ ဆင်းရဲချိန်မှာ သက်သာရရမယ်။ ဖြစ်လာတဲ့ကံကို ပြောင်းဖို့တဲ့ ပြောင်းခံတတ်ဖို့ပဲရမယ်။
သံသရာမှာ သူခိုး၊ ဒမြ၊ ရဲ၊ တရားသူကြီး၊ သူတော်ကောင်း၊ သူယုတ်မာ၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ မရှိဘူး ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်ပဲရှိတယ်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်ညဏ်မရှိသူ အရမ်းကာရော ယုံကြည့်တတ်သူဘဝပေါင်းများစွာ ဘဝပေါင်းများစွာ သဂျီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ထို့နည်းတူစွာ ဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ သဂျီးလက်ခံဖို့ခဲယဉ်းတဲ့ သရဲ၊ ဘီလူး၊ ဖုတ်ကျက် တစ္ဆေ ဘဝများစွာ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်၊ စူပါမန်းလို ဈာန်ပျံပုဂ္ဂိုလ်၊ နတ်၊ သိကြား၊ နဂါး၊ ဂဠုန် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။
ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆို အတိတ်ဘဝတွေ ပြန်မြင်နိုင်တဲ့ ပုဗ္ဗေနိဝါသညဏ်ရမှ မြင်ကောင်းတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ယုံကြည်ရကောင်းမှန်းသိတဲ့ အထုံပါမှ လက်ခံကောင်းတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း ဆိုတာမြင်မှ သိကောင်းတယ်။ သဲအင်းဂူဆရာတော်လည်း တရားဟောပွဲတခုမှာ သူဆိုးခဲ့စဉ်က ခိုးတာဘာဖြစ်လည်း ငါ့ပစ္စည်းကို အတိတ်ဘဝက ခိုးခဲ့လို့ ပြန်ယူတာလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆိုခဲ့ဘူးတယ်။ ဆိုလိုရင်းကို မနောနဲ့မနာတတ်ရင် နားထဲ ကန့်လန့်ကြီးဝင်လာမယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒါအမှန်တရားပဲ။ ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းဆိုတာ အဲဒါကိုပြောတာ။ မကျေနပ်ရင် ပြန်လုပ်၊ နောက်ပြန်ခံပေါ့ ဒါပဲရှိတယ်။ မလုပ်ရ ငုံ့ခံလို့ မတားနိုင်၊ လုပ်ရင် မပြီးနိုင်တော့လို့သာ ညွှန်ပြကောင်းတယ်။
ဆရာတော်က အတိတ်ဘဝကို ပြန်မြင်ကောင်းတဲ့အဘိညာဉ်ကို သံသရာကို ဖြတ်စေတဲ့ တန်ခိုးလို့ ဘာသာပြန်ပေးတယ်။ ကိုယ်ခံရတဲ့အခါ အမုန်းမပွားဘဲ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ သိပြီးလက်ခံနိုင်လို့ပါ။ ဆရာတော်ထံမှာ တရားပေါက်သွားတဲ့ သီလရှင်တပါး နယ်မှာသာသနာပြုစဉ် တောင်အောက်လိမ့်ကျတယ်။ နောက်ပိုင်းအဘိညာဉ်ရပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်မှာ အတိတ်ဘဝက အကိုဖြစ်သူကို တောင်အောက်တွန်းချပြီး နန်းလုခဲ့လို့ နတ်ဘီလူးဖြစ်နေတဲ့ အကိုကပြန်ဂလဲ့စားချေတာလို့ ပြန်သိရတယ်။ (သူ့ညီရယ်လို့လည်း သိချင်မှသိမယ်၊ ဒါပေမဲ့ တွေ့လိုက်ကထဲကိုက ကြည့်မရတာမျိုးကို ဥပမာယူနိုင်တယ်)။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်က အတိတ်ဘဝကို ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ အဘိညဉ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။ သူများခိုင်းတိုင်းလိုက်ကြည့်ပေးရင် ဗေဒင်ဆရာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊ လောကီအတွက်မဟုတ်၊ လောကုတ္တရာအတွက်သုံးဖို့လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒါတွေရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောနေရတာ ဘာကြောင့်သံသရာမှာ အကောင်းအဆိုးမရှိဘဲ ပြုသူနဲ့ဖြစ်သူသာရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ပုံ နားလည်နည်းကို ပြန်ဝေငှတာပါ။
Millionaire Generic ရဲ့ ပစ္စုပ္ပာန် ဘ၀မှာ ရုန်ကန်ပြီး ရထားတဲ့ပိုက်ဆံ ကို လိမ်ညာယူသွားလို့ကတော့ လုံးလုံး လက်မခံပါဘူး ခင်ဗျား။ လူ့ဘ၀မှာ ကိုယ်ရုံးကန်လှုပ်ရှားရသလောက် အပြည့်အ၀မခံစားရဘဲနဲ့
နည်းမျိုးစုံနဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတာတွေကို မြင်တတ်တဲ့မျက်စေ့ရှိရင် ထင်ထင်လင်းလင်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
တုံးတာတာနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို သူတစ်ပါးရဲ့လက်ထဲကို မထည့်လိုက်မိကြပါစေနဲ့ရယ်လို့ ဒါကိုပြောနေရခြင်းဖြစ်
ပါတယ်။ လူတွေမှာ ဘာသာရေးတွေရဲ့ဝန်ကို မနိုင်မနင်းထမ်းရတာကို မကြည့်ရက်လို့ပါ။ လူတိုင်းကို ကိုယ်
တိုင် အရှင်သခင်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဖိနပ်ဆိုတာ ချစီးရမဲ့ပစည်းပါ။ ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားရင်တော့ အင်မတန်
ကွန်မန့် တွေရော စာရေးသူရဲ့ ပို့ စ်လေးပါ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ဒါပေမယ့်ထောက်ပြစရာတခုတွေ့ ပါတယ်။စိတ်တော့မဆိုးစေချင်ပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိကြသမျှသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများတွင်မွတ်စလင်မ် ဘာသာဟုမရှိပါရှင်။လေ့လာစေချင်ပါသည်။
““”ထိုနည်းတူစွာ ဟိန္ဒူဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ၊ မွတ်စလင်ဘာ သာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတို့ကလည်း သူတို့ဘာသာ၏ လမ်းညွှန်ချက်ရှိ သည့်အတိုင်း ပြေဆိုလာသည်ဆိုပါအံ့။”””””
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဥပုဒ်လ.. မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ..။
အစ္စလမ်ဘာသာ(သာသနာ)..ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေကို ..မွတ်စလင်မ်လို့.. ခေါ်ရပါတယ်လို့.. ရွာသားတွေသိကြစေချင်ကြောင်း…။
A Muslim (English pronunciation: /ˈmʌzlɨm/[variations]), also sometimes spelled Moslem, is an adherent of Islam,amonotheistic, Abrahamic religion based on the Qur’an, which Muslims consider the verbatim word of God as revealed to prophet Muhammad. “Muslim” is the Arabic term for “one who submits to God”.
အဲ… လိမ်သူများကိုတော့ မွတ်စလိမ်လို့ခေါ်ကြပါ။ ဦးထုပ်စွပ်၊ ပါးစပ်က တတွတ်တွတ်ရွတ်၊ တနေ့ဘုရားငါးခါရှိခိုး၊ ဥပုဒ်မှန်မှန်စောင့်ပြီး ဈေးဝယ်များကို လိမ်ညာစားသောက်သူ မွတ်စလင်မ်များကို တွေ့ဖူးလို့ပါ။ ကိုယ့်အချင်းချင်းကလွဲပြီး ဘာသာခြားများဆို ကြိုက်သလိုလုပ်၊ ဘုရားမှန်မှန်ရှိခိုး ယုံကြည်နေရင် ကောင်းကင်ဘုံတက်မယ်ဆိုသူများကို ပြောပါသည်..။
ဒီပို့ စ်ကိုအခုမှတွေ့ လို့ ပါ။ ကျွန်တော်လည်း သိတတ်ပါပြီဆိုကတည်းက 8တန်းလောက်နဲ့ တူတယ် (ကိုယ့်ဥာဏ်နဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်)
ဘုရားရှိခိုးရင် ဆုမတောင်းတော့ဘူး။ ဗေဒင်တွေမယုံတော့ဘူး။ နတ်တွေဘိုးတော်တွေမယုံတော့ဘူး။
အဲ နောက်ဆက်တွဲကတော့ အိမ်က လူကြီး တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ တွေ့ လာတယ် (အထူးသဖြင့် ဘွားလေးနဲ့ ပေါ့) ။ နောက်တော့ 10 တန်းအောင်လာပြီး စာဖတ်များလာတယ်။ အထူးသဖြင့် Stephen Hawking ကထာဝရ ဘုရားသခင်ဆိုတာ ဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ ဆိုထားတာကိုဖတ်ရပြန်တယ်။ ပြီးတော့ black holes အကြောင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးပြန်တယ်။ သူစပြောပြောချင်း တလောကလုံး ဗြောင်းဆန်ကုန်တာပေါ့။
ဒီကောင်ဘာကောင်လဲတွေ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ အခုရော အနှစ်၂၀ နီးပါးအကြာမှာ ဘယ်လိုနေသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ မသိဘူး။ ဥရောပ နဲ့ အမေရိကမှာတော့ Stephen Hawking ရဲ့ အဆိုကို လက်ခံလာတဲ့သူတွေ တွေ့ ရတာများလာကြပြီ။ Hollywood ရုပ်ရှင်တွေ (Angels & Demons) ထဲမှာတောင် God ဆိုတာကိုမယုံကြည်ဘူး ဆိုတာကိုထည့်ရိုက်နေကြပြီ။ ဒီမှာများ ရိုက်လိုက်လို့ ကတော့ မတွေးရဲဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ သူပြောပါတယ်ဆိုတာကို အင်းဟုတ်တာပေါ့လို့ ခေါင်းညိတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်။ သူပြောတဲ့ တွင်းနက်ကြီးတွေကျွန်တော်မှလိုက်မမှီတာကိုး။သူပြောတာကိုလည်း မှတ်သားထားတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဆင်ခြင်ဥာဏ်၊သိမှတ်ထားမှုတွေနဲ့ ထပ်တွေးပြီးပေါင်းထပ်လိုက်တယ်။ အိုကေ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာယုံကြည်တယ်၊ သူများနစ်နာစေမယ့်အလုပ်ကိုရှောင်မယ်၊ ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုမှတ်သားလိုက်နာမယ်၊ကိုယ်တတ်နိုင်တာရှိရင် သူများကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်မယ်။ ဒါကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းရဲ့ မူပိုင် ဘာသာဖြစ်လာခဲ့တော့တယ်။
” Stephen Hawking ကထာဝရ ဘုရားသခင်ဆိုတာ ဘယ်မှာမှမရှိဘူး ”
The actual meaning is :
Stephen Hawking only said, there is no creator of world or Universe.
This saying terribly shake the religious community.
Christians trusted their God created the world.
Muslims trusted their Allah created the world.
Hinduism trusted their Maha Byhama created the world.
But for our Buddhism, it is quite OK.
Our Lord Buddha never said he created the world.
Our Lord Buddha only said,
Don’t waste your time by finding start of mankind & universe.
Your lifespan is too short & try finding your escape way from suffering.
Our Lord Buddha admitted,
He is notacreator,
He is not evenainventor,
He is onlyadiscoverer of how to escape from suffering.
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခုလိုထောက်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်စာကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ခုစီမပြောပဲ ရောထွေးပြီး ပြောလိုက်မိတဲ့အတွက် ထာဝရဘုရားသခင်မရှိဘူးဆိုပြီး ပြောလိုက်တာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 20 ကပြောခဲ့သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ နားလည်မှုလွဲသွားနိုင်တဲ့အတွက် ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ Stephen Hawking ပြောခဲ့ပါတယ် ဘုရားသခင်မရှိဘူးဆိုတာကို
ဒီနေရာမှာလည်း အကွန့် ထပ်တက်ချင်သေးရင် သူက ခရစ်ယာန်ဘဲ သူ့ ဘုရားသူပြောတာနေမှာပေါ့လို့ ။
(ဟဲလေးလို ပြောလိုက်ပါမယ်) နိုး နိုး နိုး လုံးဝမှားသွားပြီ။ လူသားအားလုံးကို သူဆိုလိုခဲ့တာပါ။
ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာ ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတာ ကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ခဲ့တာလည်း သူ့ ဆိုလိုရင်းအားလုံးကိုခြုံငုံပြီး ပြောလိုက်တာပါ။
သူနဲ့ ကျွန်တော်သဘောထားကွဲလွဲတာရှိပါတယ်။ သူကဘာသာတရားများဟာ ဘုရားသခင်ပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ကျွန်တော့်အယူအဆကတော့ ကြောက်ရွ့ံမှုအပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်လားမဟုတ်လား နိုင်ငံခြားရောက်နေသူအများစုကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ၁၀၀ မှာ ၉၀ ကျော်လောက်က
(အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေ) အဲဒီကိုရောက်သွားမှ ဘုရားရှိခိုးရတာနဲ့ ဘာနဲ့ ။ ဟုတ်ပါတယ်နော်။
မဟုတ်ပါဘူးလို့ လဲဘယ်သူငြင်းချင်သလဲ။ လိင်ကိစအင်မတန်ဆာလောင်နေတဲ့ လူဆယ်ယောက်ကို လူမမြင်ကွယ်ရာမှာ ကာလသားကြိုက်ကောင်မလေး ၅ ယောက်လောက်နဲ့ ထားကြည့်။ ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ။ အင်း အဲဒီအတိုင်းဘဲ ရဲအယောက် ၁၀၀ လောက်ဝိုင်းထားကြည့် ဒီလူတွေဘာလုပ်ရဲသလဲဆိုတာ။ အိုကေ ဒီလူတွေ သူများသားသမီးကိုပြစ်မှားရင် ငရဲကျမယ်ဆိုတာကိုကြောက်မလား ရဲအယောက် ၁၀၀ ကိုကြောက်မလား အသက်ချင်းထပ်ပြီးတော့ လောင်းလိုက်မယ်။ ဘယ်သူစိန်ရဲသလဲ။ အိုကေနော် ဘူးခံပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲရောက်တာတောင် သီလ၊သမာဓိပြည့်စုံတဲ့သူမရှိဘူးလို့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့် ဒီလိုလူမျိုး တလောကလုံးဘယ်နှယောက်ရှိနိုင်လဲ။ ပြီးတော့ ဘုရားရှင်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တာလား၊ ယုံကြည်တာလားကိုယ့်ဘာသာကိုအရင်ပြန်မေးကြည့်ပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သက်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် (ခရေစေ့တွင်းကျ၊ သူ့ ဆိုလိုရင်း) သိပြီးလား။ပါဌိလိုကြက်တူရွေးရွတ်သလိုရွတ်နေတဲ့ဘုရားစာရဲ့ အနက်အဓိပါယ်ရောအကုန်သိပြီလား လို့ မေးလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ Steven Hawking ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုတာ ဘယ်မှာမှမရှိပါဘူးလို့ ။ ကိုးကွယ်တာမကိုးကွယ်တာကျွန်တော့်အပိုင်းမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်နောင်လာနောက်သားတွေကိုလည်း ဘုရားသခင်ဆိုတာမကိုးကွယ်နဲ့ သူကတကယ်မှမရှိတာလို့ မပြောပါဘူး။ ဘယ်အရာမဆို ကျိုးကြောင်းစဉ်ခြင်နိုင်တဲ့ ဥာဏ် (IQ, EQ, reasonable thinking , critical thinking) တို့ ကိုပဲ မြင့်သထက်မြင့်အောင် တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးသွားမှာပါ။